နှစ်ဆ VIP အမှတ်များဖြင့် ၀ ယ်ရန်အငြိမ်းစား LEGO အစုံခြောက်ခု
11 / 10 / 2021 12 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 295 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၀၂၆၁ Roller Coaster, 21046 အင်ပါယာပြည်နယ်အဆောက်အ ဦး, 21313 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော, 42083 Bugatti Chiron, 75251: Dartဇ Vader's ရဲတိုက်, 75810 အဆိုပါဇောက်ထိုး, 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော။, Architecture, Creator Expert, VIP အမှတ်နှစ်ချက်, Ideas, Lego, Lego Architecture, Lego Creator Expert, Lego Ideas, Lego Star Wars, Lego Stranger Things, Lego Technic, Lego VIP, LEGO VIP အမှတ်များ, အနားယူသည်, Lego အနားယူသည်, မကြာခင်အနားယူတော့မည်, Star Wars, Stranger Things, နည်းပညာ, VIP, vip အချက်များ
နှစ်ဆ VIP အမှတ်ပွဲစဉ် started အွန်လိုင်း၊ ဤအရာကိုဤ ၀ ယ်ယူရန်အခွင့်အလမ်းကြီးတစ်ခုဖြစ်စေသည် Lego အစုံ၊ အားလုံးမကြာမီမကြာမီအနားယူတော့မည်။
တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးသည် ယခု VIP အမှတ်နှစ်ခုကိုပေးသည် ၀ ယ်ယူမှုအားလုံးနှင့် VIP အမှတ်များ၌ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းငွေပြန်အမ်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ လိုက်ကြည့်သည် အတည်ပြုခြင်း ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ အနားယူရန်လည်းစီစဉ်ထားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးလမ်းညွှန် ထွက်ခွာမှုတိုင်းအတွက် LEGO.com ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ဤကဲ့သို့သောပွဲစဉ်သည်တစ်ခုထက်ပိုသောအစုံများ ၀ ယ်ရန်စံပြအခိုက်အတန့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤသည်မှာနောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွင်မင်းကိုလက်မလွတ်စေကြောင်းသေချာစေသောအပိုဆု VIP အမှတ်များရရှိစေရန်ကြီးမားသောဖန်တီးမှုငါးခုဖြစ်သည်။
6 - 21046 အင်ပါယာစတိတ်အဆောက်အ ဦး
The Big Apple သို့ခရီးသည်တစ် ဦး နှင့်အတူစာရင်းထဲတွင်ပထမဆုံးဖြစ်သည် Lego Architecture 21046 အင်ပါယာပြည်နယ်အဆောက်အ ဦး New York ရဲ့အထင်ရှားဆုံးမိုးမျှော်တိုက်တွေထဲကတစ်ခုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပါ။
မိုက်ခရိုစကေးပုံစံသည်စစ်မှန်သောအင်ပါယာစတိတ်အဆောက်အအုံ၏အမြင့်သို့မဆန့်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အိမ် (သို့) ရုံးခန်းနေရာတိုင်းနီးပါးတွင်ပြသနိုင်စေသည်။ ခြေရင်း၌ကြွေပြားခင်းထားသောလမ်းများ 21046 အင်ပါယာပြည်နယ်အဆောက်အ ဦး အသေးစားအဝါရောင်အငှားယာဉ်များပင်ရှိသည်။
5 - 75251: Dartဇ Vader's ရဲတိုက်
အသစ်တွင်ပါဝင်သည် Lego Star Wars ကြောက်စရာပုံပြင်များ Mustafar ၏ခံ့ညားသော Halloween ပွဲတော်သည်အထူးအကြောင်းအရာဖြစ်သည် 75251: Dartဇ Vader's ရဲတိုက်မရ။ သုံးလွှာကို ဖြတ်၍ မျက်နှာပြင်အောက်ရှိအရိပ်တစ်ခု၊ Darth Vader သည်ငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်သည်၊ ပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်ပြီးအင်ပါယာ၏နောက်ဆက်တွဲများကိုသူ၏သခင်၏အလိုတော်အတိုင်းစီစဉ်နိုင်သည်။
သီးသန့် minifigures နှစ်ခုနှင့် သံSာ Lord's TIE Fighter၊ 75251: Dartဇ Vader's ရဲတိုက် ၎င်းသည်နှစ်ကုန်တွင်အငြိမ်းစားယူပြီးနောက်မကြာမီပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မည့်နေရာတစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုသည်။
၄ - ၁၀၂၆၁ Roller Coaster
နှစ်ဆ VIP အမှတ်ပွဲသည်တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးမှရရှိနိုင်သောအကြီးဆုံးအစုအဖွဲ့များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြွေးများသိုလှောင်ရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အနားယူခြင်း Lego Creator Expert ၁၀၂၆၁ Roller Coaster ဤသတ်မှတ်ချက်များကိုပြည့်စုံစေသည်။
minifigures ၁၁ ခုနှင့်အပိုင်းအစ ၄,၁၂၄ ခုပါ ၀ င်သည့်အပန်းဖြေပန်းခြံသင်္ကေတကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း ၁၀၂၆၁ Roller Coaster လောလောဆယ် VIP အမှတ် ၄၈၀၀ တန်ဖိုးရှိပြီးတရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးမှထွက်ခွာမည့် Fairground Collection ၌နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်။
3 - 42083 Bugatti Chiron
တည်ဆောက်ရန် ပို၍ ခက်ခဲသောပုံစံတစ်ခုအတွက်၊ Lego နည်းပညာ 42083 Bugatti Chiron အစစ်အမှန်စူပါကားများကဲ့သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သောရှုပ်ထွေးသောဖန်တီးမှုကိုပေးသည်။
အုတ်ခဲ ၃,၅၉၉ အရွယ်အစားရှိအရာအားလုံးကိုသင်မြင်နိုင်သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်သေတ္တာတစ်လုံးထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အစီရင်ခံစာ set ရဲ့ထုတ်ဖော်မှု၊ 42083 Bugatti Chiron အင်္ဂါရပ်တစ်ခုကိုသော့ဖွင့်ရန်ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းသော့တစ်ခုပါ ၀ င်သည် Lego နည်းပညာ ယာဉ်။ Bugatti Chiron အစစ်အမှန်ပိုင်ဆိုင်ရန်မျှော်လင့်ထားသူများသည်၎င်းကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည် Lego နည်းပညာ မော်ဒယ်ကိုစျေးသက်သာသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနှင့် ၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာအထိသာ
၂ - ၉၂၁၇၇ ကိုပုလင်းထဲထည့်ပါ
ပြန်လည်လွှတ်ပေးသည် Lego Ideas 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော ပိုင်ဆိုင်ရန်ဒုတိယအခွင့်အရေးကိုကမ်းလှမ်းသည် 21313 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘောမရ။ ဤအရာသည်လက်ခံရန်အတွက်မော်ဒယ်နှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ရန်လူကြိုက်များခဲ့သော set ဖြစ်သည် ဒုတိယမြောက်ပစ်လွှတ်မှု.
အသွင်အပြင်ကိုဖမ်းယူသည် classic အပြင်အဆင်, Lego Ideas 92177 တစ်ပုလင်းထဲမှာသင်္ဘော အင်္ဂါရပ်များ အပြောင်းအလဲအနည်းငယ် မူလတည်ဆောက်မှုမှ ငါတို့မှာတစ်ခုရှိတယ် In-depth ပြန်လည်သုံးသပ် ပထမဆုံးဖတ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သော်လည်းပြန်လည်ထုတ်ဝေသောအစုံသို့ရောက်သောအခါ၎င်း၏ရွက်လွှင့်သည့်နေ့ရက်များ ရေတွက်ကြသည်.
1 - 75810 အဆိုပါဇောက်ထိုး
တစ်ခုတည်း Lego Stranger Things set မှမကြာမီအနားယူတော့မည် LEGO.comအတူ 75810 အဆိုပါဇောက်ထိုး နာမည်ကျော် Netflix စီးရီးများ၏တစ်ခုတည်းသောအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောအပန်းဖြေစခန်းဖြစ်ခြင်း။
စတုတ္ထရာသီသည်မကြာသေးမီကနမူနာတစ်ခုနှင့်တစ်ခုရရှိခဲ့သည် စောစောကနောက်ပြောင်မှုminifigure သရုပ်ဆောင်ရန်ရည်ရွယ်သူမည်သူမဆိုမှာကြားလိုသည် 75810 အဆိုပါဇောက်ထိုး မကြာခင် အပိုဆု ၁,၄၄၀ VIP အမှတ်များသည်သင့်အားလျှော့စျေးရရန်ကူညီလိမ့်မည် ပိုသင့်တယ် Stranger Things အစုံ ၂၀၂၂ မှာရောက်မယ်.
← Lego အသစ် Ideas လုပ်ဆောင်ချက်သည်ဇောက်ထိုးအောက်သို့တည်ဆောက်ရန်တောင်းဆိုသည်
နေ့၏အုတ်ပုံ: ပင်လယ်နက်ရေငုပ် →